Idgwọ na Ngosipụta Mgbasa ozi | Martech Zone
Idgwọ na ngosipụta ngwaahịa, ọrụ na akụkọ yana ndụmọdụ imewe mgbasa ozi na usoro kachasị mma maka ndị ahịa na Martech Zone
Ndị na-eme egwuregwu na-esiri ike ileghara anya, ọbụlagodi maka ụdị egwuregwu na-abụghị nke egwuregwu. Nke ahụ nwere ike ịdị ịtụnanya, yabụ ka anyị kọwaa ihe kpatara ya. Ọtụtụ ụlọ ọrụ tara ahụhụ n'ihi Covid, mana egwuregwu vidio gbawara. Ebumnuche ya ga-akarị ijeri $ 200 na 2023, uto nke ihe e mere atụmatụ 2.9 ijeri ndị egwuregwu gburugburu ụwa na 2021. Global Report Market Report Ọ bụghị naanị ọnụọgụgụ na-atọ ụtọ maka ụdị egwuregwu na-abụghị nke egwuregwu, mana usoro okike dị iche iche na gburugburu egwuregwu. Di iche iche na -emepụta ohere iji chee
Enwere m enyi m nke na-ese ma na-ete ọsịsọ mgbidi ma rụọ ọrụ dị ịtụnanya. Ọ bụ ezie na nka a bụ ego dị ịtụnanya nke nwere ike ịgbanwe ebe ọrụ ma ọ bụ ebe mkpọsa, ikike iji chepụta ma gosipụta ihe eserese na mbara ihu ga-ahapụkarị ịwụnye nrụnye ma ọ bụ nsụgharị onye na-ese ihe. Ọgbara ọhụrụ na-ebi akwụkwọ apụtawo nke ga-agbanwe nke a, ọ bụ ezie na wall na-ebipụta mgbidi mgbidi. The Wall Printer The Wall Printer kacha ọhụrụ vetikal
Influ2: Otu Aka-Dabere Ahịa-Dabere Marketing (ABM) Mgbasa Platform
Akaụntụ anaghị eme mkpebi, ndị mmadụ na-eme. Ihe omume azụmaahịa na-aga nke ọma (ABM) na-aga mgbe a na-edekọ akụkọ na ọkwa dị oke mkpa mana ọ na-agwa ndị mmadụ okwu na ọkwa ogbugbu. Influ2 na-akọwa nke a dị ka mmemme ABM dị elu ebe atụmatụ ndị dị na ya gụnyere: Nkupu na otu ịzụta. Gaa gafee ịhọrọ akaụntụ ahụ: ị ga-enyocha ndị na-eme mkpebi ụfọdụ gụnyere ịzụ ihe dị iche iche nke akaụntụ gị. Gaa na nkọwa nke ICP gị iji tinye ndepụta nke ndị na-eme mkpebi
Mmalite nke blockcheni dị ka ihe ngwọta iji nweta data echedoro bụ mgbanwe nnabata. Ugbu a, ka usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ka ọnụnọ ha na-emegbu ndị mmadụ mgbe niile. Ọ bụ eziokwu. Eziokwu nke dọtara oke mkpu nke ọha na afọ ole na ole gara aga. Naanị afọ gara aga n'onwe ya, Facebook nọrọ n'oké ọkụ maka iji data nke 1 nde ndị England na Wales eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Mark Zuckerberg na-eduzi mgbasa ozi mgbasa ozi
Smarketing: :kwado B2B Sales & Marketing Teams gị
Site na ozi na teknụzụ na mkpịsị aka anyị, njem ịzụ ahịa agbanweela nke ukwuu. Ndị na-azụ ahịa ugbu a na-eme nyocha ha ogologo oge tupu ha agwa onye na-ere ahịa ahịa okwu, nke pụtara na ịre ahịa na-arụ ọrụ dị ukwuu karịa ka ọ dịbu. Mụtakwuo banyere mkpa nke "smarketing" maka azụmahịa gị na ihe kpatara ị ga-eji kwado ndị ahịa na ndị ahịa gị. Gịnị Bụ 'Ọarkụ Smụ'? Smarketing na-eme ka ndị ahịa gị na ndị ahịa gị dị n’otu. Ọ na-elekwasị anya na ịhazi ihe mgbaru ọsọ na ọrụ ọzọ
Ndị nkwado Adtech